Tag: eventscribe boost | Martech Zone
Tag: eventscribe boost
Iindlela ezili-9 zokuHanjisa imicimbi yakho ye-B2B ngeTekhnoloji yeNdibano
NgoLwesibini, Septemba 26, 2017 NgoLwesibini, Septemba 26, 2017 UMichael Doane
Entsha Kwistokhwe Sakho seMartech: Isoftware yoLawulo loMsitho abacwangcisi bemisitho kunye nabathengisi baninzi ekufuneka bewenzile. Ukufumana izithethi ezibalaseleyo, ukukhawulezisa umxholo owoyikekayo, ukuthengisa inkxaso-mali, kunye nokuhambisa amava awodwa abakhoyo kubandakanya ipesenti encinci yemisebenzi yabo yemihla ngemihla. Okwangoku, yimisebenzi ethatha ixesha elininzi. Yiyo loo nto abaququzeleli beminyhadala ye-B2B besongeza ukongeza iTekhnoloji yoMsitho kwisitaki sabo seMartech. KwiCadmiumCD, sichithe ngaphezulu kweminyaka eli-17 sisenza kwaye sipolisha